Maxkamadda Ciidamada oo baareysa in ciidamada dowladda ku lug lahaayeen dagaalkii Beledweyn – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyaha Maxkamadda darajada koowaad ee Ciidamada qalabka sida G/Dhexe Xasan Cali Nuur Shuute oo gaaray magaalada Beledweyn ayaa sheegay in ujeedka ay u yimaadeen magaalada uu yahay sidii ay u baari lahaayeen waxa ka jira eedeymo la xiriira in ciidamada dowladda ka qeyb qaateen dagaaladii dhowaan dhacay.
Waxaa uu sheegay in Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ay tallaabo ka qaadi doonto cid kasta oo ku cadaato inay ku lug lahaayeen dagaalkii Beledweyn.
“Maxkamadda waxay baareysaa waxa ka jira eedeymaha la xiriira in ciidamada dowladda ka qeyb qaateen dagaalka, cid walba oo ku cadaata baaritaanka aan wadna tallaabo cad ayay Maxkamaddu ka qaadeysaa”ayuu yiri Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada koowaad.
Saraakiil ka socota Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta ka bilaabaya magaalada Beledweyn baaritaanka la xiriira arrintan, waxayna kormeeri doonaan goobihii dhowaan lagu dagaalamay, iyagoo wax ka weydiinaya dadkii rayidka ahaa ee lagu dul dagaalamay.
Baaritaankan ayaa noqonaya kii u horeeyay noociisa oo ay Maxkamadda qaado, iyadoo horay u jireen warar sheegayay in ciidamada dowladda ay dagaalada ka dhaca gobolada dalka ay hab beeleed ahaan ugu qeyb galaan.